CABDINUUR “Waan iska casilay xilkii Guddoomiye ku-xigeenka guddiga jaaliyada” – somnieuws.com
CABDINUUR “Waan iska…
Cabdinuur Faarax, oo ahaa Guddoomiye ku-xigeenkii Guddiga jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan Magaalada Zwolle & Magaalooyinka ku dhowdhow, ayaa shalay shaaciyay inuu iska casilay xilkaasi, xilli kulan uu la qaatay Guddoomiyaha guddigaasi C/qaadir Cali [Nuune] & xubno ka tirsan Guddiga & guud ahaan jaaliyada.
Aqoonyahan C/nuur, oo caawa la hadlay SOMNIEUWS wuxuu daboolka ka qaaday arrimo ay ka mid tahay sababihii is-casilaadiisa & xaaladda guud ee Jaaliyada, isaga oo xusay in dedaal & juhdi badan uu ku bixiyay sidii Soomaalida ku dhaqan Zwolle & nawaaxigeeda u heli lahayd jaaliyad ay ku middeysan yihiin, balse markii uu arkay in riyadiisu aysan meel mar noqon karin uu go’aansaday in xilkii uu ku soo wareejiyo dadkii markii horeba la jeclaaday.
“Ujeeddada aan u qabtay xilka Guddoomiye ku-xigeenka Guddiga waxay ahayd; inaan ka shaqeeyo danta & masaaliixda mushtamaca Soomaalida. Ninkii yiraahda, bulsho ayaan xil u hayaa, waa inuu waajibaadkiisa ka run sheegaa kana shaqeeyo horumarka bulshada, haddii anigu hadafkaygu ii suurtageli waayay waxaan go’aansaday inaan u soo celiyo dadkii shalay codkooda isiiyey” ayuu yiri Cabdinuur, wuxuuna intaasi sii raaciyay inuu u mahadcelinayo walaalihii ay soo wada-shaqeeyeen.